प्रधानमन्त्री देउवाले मुख खोलेपछि ‘हिरो’ पल्टिन खोज्दै प्रचण्डले यस्तोसम्म गरे ! - Media Dabali
प्रधानमन्त्री देउवाले मुख खोलेपछि ‘हिरो’ पल्टिन खोज्दै प्रचण्डले यस्तोसम्म गरे !
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार नै मुगु दुर्घटना लगायतका मृतक परिवारलाई राहत र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरिसकेका थिए ।
देउवाले दुर्घटना भएकै दिन सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘मुगु, कास्की र अछाममा भएको सडक दुर्घटनाले म स्तब्ध भएको छु । दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दछु । दुर्घटनामा मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई उचित राहत र घाइतेको उद्धार एवं निःशुल्क उपचार सरकारले गर्नेछ । सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सार्वजनिक–निजी सवारी साधनको नियमित परीक्षण एवं मर्मत गर्न, क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्न र सुरक्षाका सबै मापदण्डहरू अपनाउन पनि म सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’